अवकाशप्राप्त ५२ प्रहरी अधिकृतका घरमा कार्यरत ८५ प्रहरी फिर्ता, कसको घरबाट कति जना? - खबरमञ्च खबरमञ्च
२७ पुस, खबरमञ्च, at 7:39 AM
By खबर मञ्च / January 11, 2019 / Comments Off on अवकाशप्राप्त ५२ प्रहरी अधिकृतका घरमा कार्यरत ८५ प्रहरी फिर्ता, कसको घरबाट कति जना?
काठमाडौं । अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीको घरमा अवैध रूपमा कार्यरत ८५ प्रहरी मुख्यालय तानिएका छन्।
Last Modified: January 11, 2019 @ 7:39 am
आवुधावीमा सात महिनादेखि डेढ सय नेपाली अलपत्र